Free Thinker: ကွာခြားနေတဲ့မျက်နှာများ၊ ဒီကနေ့မြန်မာလူငယ် နဲ့ ကျွန်တော့်သားရဲ့ ဒိုင်ယာရီ
ကွာခြားနေတဲ့မျက်နှာများ၊ ဒီကနေ့မြန်မာလူငယ် နဲ့ ကျွန်တော့်သားရဲ့ ဒိုင်ယာရီ
(ယခုဆောင်းပါးမှာ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ကိုကိုမောင် ၏ ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ သူ့ခံစားချက် (ကျွန်တော်တို့တွင်လည်း ရှိနေသော ခံစားချက်) ကို မိတ်ဆွေတို့အား ပြန်လည် ဝေမျှခံစားလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါ၏။)
ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်လောက်မှာ မြန်မာပြည်ကနေ နာမည်ကျော် ဟာသသရုပ်ဆောင် ကိုဇာဂနာ တစ်ယောက် နိုင်ငံခြားကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထွက်ပြီး ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို အရှေ့တောင် အာရှဒေသမှာရှိတဲ့ အချို့နိုင်ငံတွေကို သွားရောက်လေ့လာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ သူနဲ့ မီဒီယာတစ်ချို့ အင်တာဗျူးကြတဲ့ ရုပ်သံသတင်းတွေကိုလည်း အင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့် ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စူးရှတဲ့အမြင်နဲ့ ပြည်တွင်းကလူငယ်တွေနဲ့ ပြည်ပကလူငယ်တွေရဲ့ မျက်နှာမှာပေါ်လွင်နေတဲ့ ကွာခြားမှုတွေကို ပြောပြသွားတာလည်း ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လည်း ခေါင်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ကို ဒီလိုရေးဖြစ်လိုက်တာပါ။
လူငယ်တွေရဲ့မျက်နှာပေါ်က ကွာခြားမှုဆိုတော့ လူငယ်တွေအကြောင်းပဲပေါ့။
ပထမဦးဆုံးပြောရမယ့် လူငယ်နဲ့ မိဘများရဲ့ခံယူချက်
လူငယ်နဲ့ မိဘများရဲ့ခံယူချက်ဆိုလို့ ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ မိသားစုအကြောင်းပါ။ လူငယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော့်မှာ သားတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ သူ့ကို ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ် ဇွန်လမှာမွေးပါတယ်။ အခုမှ (၁၁)နှစ်ကျော် (၁၂)နှစ်ထဲမှာ ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့်အသက်(၃ဝ) ပြည့်တဲ့နှစ်မှာ သူ့ကို မွေးတာဆိုတော့ သူနဲ့ကျွန်တော်က အနှစ်(၃ဝ)တိတိ အသက်အားဖြင့် ကွာတာပေါ့။ မိဘဖြစ်လာတော့ မိဘတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ့်သားသမီးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်ကြတာပါပဲ။ ဆိုတော့ကာ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီးတို့ နှစ်ယောက်စလုံး သားတစ်ယောက်ထဲ မွေးထားတာဆိုတော့ သူ့အတွက်ပဲ စီမံကိန်းတွေ ချနေကြမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မပြောလည်း တွေးကြည့်ရင်တောင် လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ မိဘတိုင်းလည်း ဒီလိုပဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သေချာသလောက်ပါပဲ။
ကျွန်တော်ရော၊ ကျွန်တော့်ဇနီးပါ သားမမွေးခင်ကရော၊ အခုအချိန်အထိ သာမန်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေပေါ့။ နှစ်ယောက်စလုံး အလုပ်လုပ်ခဲ့တော့ ရကြတဲ့လခနဲ့ သူဌေးမဖြစ်နိုင်ပေမယ့် နေနိုင်စားနိုင် သာမန်ပါပဲ။ သားကိုမွေးပြီးနောက်တော့ ကလေးကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဟာ ငွေရှာတာထက်အများကြီးပိုပြီး အရေးကြီး တယ်လို့ ခံယူတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ဇနီးသည်ဟာ အလုပ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော့်သား အကြောင်းမပြောခင် ကျွန်တော့်မိဘ၊ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်အဖေအကြောင်း ပြောပြ ရအုံးမယ်။ ဒါမှ မိဘရဲ့ခံယူချက်က သားသမီးတွေအပေါ် ဘယ်လိုလွမ်းမိုးတယ်ဆိုတာ မြင်သာမှာမို့လို့ပါ။ ပြီးတော့လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်ရည်မှန်းသလို ဖြစ်မလာတာတွေကို မြင်စေချင်လို့ပါ။
ကျွန်တော်တို့မှာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ(၆)ယောက် ရှိပါတယ်။ အားလုံးကလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် (၂)နှစ်စီလောက်သာ ကွာကြတာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က အခြေအနေကို စဉ်းစားကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ အဖေ အမြဲဆိုခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ ငါ့တို့မှာ မင်းတို့ကို အမွေပေးစရာ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝတာ ဘာမှမရှိဘူး။ ပေးစရာဆိုလို့ ပညာအမွေသာရှိတယ်။ ကျောင်းပြီးအောင်တော့ အားလုံးကို ကြိုးစားပြီး ထားပေးမယ်ပေါ့။ သို့ပေမယ့်လည်း (၆)ယောက်ဆိုတဲ့ အင်အားကမနည်းတော့ အတော် မလွယ်တာပါ။ ဖြစ်ချင်တော့ အစ်မအကြီးဆုံး က ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ (၁ဝ)တန်းအောင်တော့ အမှတ်ကောင်းပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်ကို တက်ခွင့်ရပါတယ်။ သူကတော့ ဆရာဝန်လုပ်ဖို့ထက် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ဖို့ကို ပိုပြီးတော့ ဝါသနာပါတယ်လို့ ပြောဖူးပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း အဖေကရော ကျန်တဲ့ လူကြီးဆွေမျိုးတွေအားလုံးကပါ ဆေးကျောင်းတက်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
အဖေ့ စီမံကိန်းနဲ့ မျှော်လင့်ချက်က သူဆေးကျောင်းတက်လို့ (၇)နှစ်ပြီးရင် အငယ်တွေ တက္ကသိုလ်ကျောင်း တက်မဲ့အချိန်မှာ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် မိသားစုအတွက် အသက်ရှုချောင်စရာပေါ့။ အမေကတော့ သာမန် အိမ်ရှင်မဆိုတော့ လိုအပ်တဲ့ဝင်ငွေကို ကြက်မွေးမြူရေး၊ အိမ်ဆိုင်ဖွင့် စသဖြင့်နဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်း ကရှာရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၈၁ မှာ ဒုတိယအစ်မ(၁ဝ)တန်းအောင်ပါတယ်။ သူတို့အချိန်မှာ စနစ်ပြောင်းပြီး ဒေသကောလိပ် တွေ စပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူလည်းပဲ ဒေသကောလိပ်ကနေတဆင့်zoology လို့ခေါ်တဲ့ သတ္တဗေဒမေဂျာနဲ့ အိမ်နဲ့နီးနီးနားနား မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာပဲ တက်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ ၁၉၈၄ ခုနှစ်ကျတော့ တတိယအစ်မက(၁ဝ)တန်းအောင်ပြန်ပါရော။ ဒုတိယနဲ့ တတိယ သူတို့ နှစ်ယောက်က(၃)နှစ်ခြားပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ သူက ရန်ကုန်စီပွားရေးတက္ကသိုလ် ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်က(၈)တန်းရောက်နေပါပြီ။ ကျွန်တော့်ညီက(၆)တန်းနဲ့ အငယ်ဆုံးညီမက(၃)တန်းပါ။ စဉ်းစား ကြည့်ရင် ကျွန်တော့်မိဘတွေ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူသမီး(၃)ယောက်နဲ့ တော်တော် ခေါင်းခြောက်နေပြီ ဆိုတာ သိလောက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာ (၁ဝ)တန်း အောင်ပြန်ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ၁၉၈၆ နိုဝင်ဘာလလောက်ထင်ပါတယ် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ကို ကျွန်တော် စတက် ရပါတယ်။
ပြောရရင် ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော့်ဒုတိယအစ်မက မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကနေ သတ္တဗေဒမေဂျာနဲ့ ကျောင်းပြီးလာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစ်မကြီးကတော့ သူဝါသနာမပါလို့လားမသိပါဘူး ဆေးကျောင်းမှာ ဆပလီတွေထိပြီး Final Part I နောက်ဆုံးနှစ်ပထမအတန်း မှာပဲရှိသေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျောင်းမပြီး သေးပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ဒုတိယအစ်မက ကျောင်းပြီးတာနဲ့ အလယ်တန်းပြ ကျောင်းဆရာတွေခေါ်တော့ ဝင်လျှောက်ရင်း ကျောင်းဆရာမဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီမှာလည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးလောက အကြောင်း နည်းနည်းလောက် မြင်ကြည့်မိပါတယ်။ အစ်မက သတ္တဗေဒနဲ့ကျောင်းပြီးလာတာဆိုတော့ သူ့ကို Bio လို ဘာသာရပ်မျိုးကို သင်ခိုင်းရင် အလွန်တော်တဲ့ ဆရာမကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာ သေချာသလောက် ပါပဲ။ သို့ပေမယ့်လည်း အင်္ဂလိပ်စာသင်ခိုင်းတော့ အခုအချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်စာဆရာမတစ်ယောက် ဖြစ်လာ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်း (၁ဝ)တန်းအောင်ချိန်မှာ သချာင်္(၉၇)မှတ်နဲ့ ဂုဏ်ထူးတစ်ဘာသာ ပါပြီး စုစုပေါင်းရမှတ်(၄ဝ၈)မှတ်နဲ့ ဝါသနာပါတဲ့ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ကပ်လွဲခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်(၁၉၈၆)မှာ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်အမှတ်က(၄၁ဝ)လောက်သာပါ။ မတတ်နိုင်ပါဘူး ကိုယ်ကညံ့လို့ ဒီလောက်အမှတ်ကိုတောင် ကျော်နေအောင် မလုပ်ထား တာပဲကိုး။ ထားပါတော့ …
ပြောချင်တာတွေသိပ်များတော့ လမ်းတွေချော်ကုန်ပြီ။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သိပ်ဝါသနာမပါလှပေမယ့် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ကို တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာမှာ ဒုတိယဦးစားပေး ထည့်ထားမိတော့ တန်းကနဲနေအောင် ရောက်သွားတော့တာပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၈၇ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ခါနီး(၃)(၄)လအလို ကျွန်တော်တို့ပထမနှစ်မှာ ၉ဝ၊ ၇၅၊ ၂၅ ကျပ်တန် ငွေတွေ သိမ်းတော့ ပထမနှစ်အတန်းတင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခါနီးမှာ ကျောင်းတွေပိတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ညီလေးက(၁ဝ)တန်း တက်နေပါပြီ။ တက္ကသိုလ်တွေသာပိတ်ပြီး အထက်တန်းကျောင်း တွေတော့ မပိတ်ခဲ့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၁၉၈၈ နှစ်ဆန်းမှာ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပြီး စာမေးပွဲတွေ ပြန်ဖြေရပါတယ်။ ၁၉၈၈ မတ်လမှာ ကျွန်တော့်ညီလည်း (၁ဝ)တန်းစာမေးပွဲဖြေရပါပြီ။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့်ညီငယ်က (၁ဝ)တန်းအောင်ချိန်၊ ကျွန်တော်တို့လည်း ဒုတိယနှစ်စတက်ပြီး သိပ်မကြာခင်ပဲ မြန်မာ့အကွေ့အပြောင်း ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး စတင်ပါတော့တယ်။ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံအကြောင်း ပြောရရင် ရှည်လျှားလှပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခေါင်းစဉ်နဲ့ လွဲကုန်ပါမယ့်၊ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပဲ ဆက်ပြောရအောင်ပါ။
ကျွန်တော့် အဖေရဲ့ စီမံကိန်းမှာ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ မပါခဲ့တော့ အဲဒီအချိန်မှာ ဒုတိယ အစ်မတစ်ယောက်သာ တက္ကသိုလ်ကနေကျောင်းပြီးလို့ ဆရာမဖြစ်နေပြီး အစ်မအကြီးဆုံးကတော့ ဆေးတက္ကသိုလ်မှာ တန်းလန်း၊ တတိယအစ်မက ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာ တန်းလန်း၊ ကျွန်တော်က ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှာ တန်းလန်းနဲ့ ကျွန်တော့်ညီငယ်က(၁ဝ)တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ် တက်ဖို့ စောင့်နေကြရပါတော့တယ်။
ဒီကြားထဲ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ ကျွန်တော့်တတိယအစ်မက စက်ချုပ်၊ ကျွန်တော်တို့လည်း အထည် လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာ အုန်းသီးပေါတော့ အမေက အုန်းသီးလိုက်ဝယ် ကျွန်တော်တို့ က အုန်းသီးတွေခွဲ၊ အုန်းသားခြောက်လှမ်း၊ ရတဲ့ အုန်းဆံခြောက်ကို ကျွန်တော်က ရန်ကုန်ကို ကားနဲ့တင်၊ အလုံဖက်က အုန်းဆီစက်တွေမှာ သွားပြီးရောင်းရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြို့မှာ အုန်းသား ခြောက်ပွဲရုံရှိပေမယ့် ရန်ကုန်တက်ရောင်းရင် ဈေးပိုရတော့ ကျွန်တော်အမြဲလိုလို ရန်ကုန်အထိသွားပြီး ရောင်းပါတယ်။ ဒီလိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကျောင်းပိတ်ထားချိန်မှာ ကျောင်းဖွင့်ရင် ကျောင်းပြန်တက်ဖို့ ဝင်ငွေရှာထားကြရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၉၁ ထင်ပါတယ်။ ကျောင်းတွေကို ပြန်ဖွင့်ပြီး (၂)လထဲနဲ့ စာမေးပွဲတွေ စစ်မယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ညီလည်း ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကို တက်ခွင့်ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိဘတွေ ဘယ်လောက် ခေါင်းခြောက်မယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်ရင်သိပါတယ်။ ကျွန်တော့် အစ်မကြီးက အဲဒီအချိန်မှာ ဆေးရုံမှာ အလုပ်သင်ဆရာဝန် ဆင်းနေပါပြီ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ ငါသာ ရိုးရိုးသာမန် မေဂျာ တွဲကို ပြောင်းယူပြီး တစ်ဖက်က အလုပ်လုပ်ရင် ပိုအဆင်ပြေမလားတွေးမိပါတယ်။ ပြီးတော့ အစ်မကြီးသာ ဆရာဝန်စဖြစ်ပြီဆိုရင် နည်းနည်းတော့ ထောက်ပံ့လာနိုင်မလားပေါ့။ ဆိုတော့ ကျောင်းပြန်တက်ပြီး ဒုတိယနှစ်အောင်မှ ကျောင်းပြောင်းရင် မေဂျာမှာ ဒုတိယနှစ်ကိုပဲ ပြန်တက်ရမယ် ဆိုပြီးတော့ အဲဒီနှစ်ကို ကျွန်တော် ကျောင်းသွားပြီး မတက်ဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။
ဒီတော့ တတိယနှစ် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က တစ်ယောက်နဲ့ ပထမနှစ် စက်မှုတက္ကသိုလ်တစ်ယောက် ကျောင်းသွားတက်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်လို့ ကျောင်းသွားတက်ချိန်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျွန်တော် ကျောင်းပြန်မတက်ရတဲ့ခံစားချက်ကို အခုအချိန်အထိ ကျင်နေအောင် ခံစားရဆဲပါပဲ။
ကျွန်တော့်အဖေရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားစေတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်မကြီးဟာ အလုပ်သင် ဆရာဝန်ပြီးပြီးချင်းပဲ သူဖာသာသူ အိမ်ထောင်ပြုသွားတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်အစ်မကြီးအတွက် မိသားစုက ကုန်ကျခဲ့တာတွေ၊ နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ အခွန်တော်ငွေတွေထဲကနေ သူတို့ကျောင်းမှာ သူ့အတွက် ကုန်ကျခဲ့တာတွေဟာ အဟောသိကံဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူဟာ ကျောင်းပြီးကထဲက ဒီကနေ့အထိ ဆရာဝန်တာဝန်ကို တစ်နှစ်ပြည့်အောင်တောင် ကြိုးစားမထမ်းဆောင်ပဲ သာမန်အိမ်ရှင်မ ဘဝနဲ့ပြီးခဲ့လိုပါပဲ။ ဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့သာ စောစောစီးစီးသိခဲ့ရင် သူ့အတွက်အချိန်လည်းကုန်၊ ငွေလည်းပန်းတဲ့ ဒီလမ်းကို ကျွန်တော့်အဖေ ရွေးခဲ့မယ်မထင်ပါဘူး။ အဲဒီလိုအခြေအနေနဲ့ အဲဒီအချိန်ဟာ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုဘဝရဲ့ အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေထဲမှာ ကျွန်တော့်ညီလေးဟာ အခက်ခဲဆုံးဘဝနဲ့ တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့သူပါ။ သူကျောင်းစတက်ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ မောင်နှမတွေလိုနေကြပြီး တစ်မြို့တည်းနေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့် အစ်မကြီးရဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့ သူ့ညီတို့ဟာရန်ကုန်မှာMetronic ဆိုတဲ့ Safeguard တွေစတင်ဈေးကွက်တင် နေချိန်ပေါ့။ သူတို့ကျေးဇူးကြီးမားပါတယ်။ ကျွန်တော့်ညီလေးကို သူတို့ အလုပ်မှာခေါ်ထားပြီး ညဖက်မှာ အလုပ်လုပ်၊ နေ့ဖက်ကျောင်းတက်နဲ့ ထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ညီဟာ ကျောင်းတစ်ဖက် အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ပထမနှစ်ကစလို့ နောက်ဆုံးနှစ်တိုင်အောင် ဒီလိုနည်းနဲ့ သူ့ကျောင်းစားရိတ် သူရှာပြီး တက်ရင်း စက်မှုတက္ကသိုလ်ကနေ ၁၉၉၆/၉၇ မှာထင်ပါတယ် ကျောင်းပြီးခဲ့ပါတယ်။
ဆက်ပြောရရင် ကျွန်တော်က ၁၉၉၂ နောက်တစ်နှစ်ကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့ ကျွန်တော့်ညီအတွက် စိတ်အေးရတော့ ကျွန်တော်လည်း မေဂျာကို မပြောင်းဖြစ်တော့ဘဲ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှာသာ ကျောင်းပြန်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းကတော့ စာမေးပွဲကျတာမဟုတ်ပဲ တစ်နှစ်နောက်ကျခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကျောင်းတက်ဖို့လည်း အပြေလည်ချည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အမြဲလိုလို ကျွန်တော်ဟာ ကျောင်းပြန် ဖွင့်စအချိန်တွေမှာ တစ်လတန်သည် နှစ်လတန်သည် ကျောင်းနောက်ကျလေ့ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်က ရေဆင်းဆိုတော့ ရန်ကုန်လို အလုပ်မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒီတော့ အိမ်နီးနားချင်းတွေရဲ့ တောင်ငူကသစ်စက်မှာ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျောင်းဖွင့်ရင် နောက်ကျမှ သွားတာက အလုပ်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံစုနေရလို့ပါ။ ရန်ကုန်က အဖေ့မိတ်ဆွေတွေစီမှာလည်း ငွေ ၅ သောင်းကို ငွေတိုးပေးထားပြီး ရတဲ့အတိုး ၂ဝဝဝ ကျပ်ကို ကျောင်းစားရိတ်လုပ်ပြီး ကျောင်းတက်ရပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အိမ်မှာလည်း အဖေ၊ အမေ၊ အကြီး၊ ညီမငယ်နဲ့ ကျောင်းဆရာမ ဒုတိယအစ်မတို့က ထမင်းခြောက် ကျော်ရောင်းတာတို့ အုန်းသီးလှမ်း၊ အုန်းသားခြောက်ရောင်းတာတို့ မျိုးစုံအောင်လုပ်ပြီး ငွေရှာခဲ့ကြ ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ လျှာထိုးသစ်တွေ ကုန်ကားပေါ်ထမ်းတင်ဖူးပါတယ်။
ကျွန်တော့်အဖေဟာ အာဏာနဲ့ငွေ၊ လဘ်စားပြီး ထမင်းရှာစားဖို့ကို ကိုယ်တိုင်မလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် အားပေး အားမြှောက်လည်း မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အဖေရဲ့ ညီမနှစ်ယောက်က စတိုးဆိုင်ဖွင့်ပြီး သူတို့ပိုက်ဆံနဲ့ပဲ သူတို့အတွက် လိုင်းကား ထောင်ပေးခဲ့ပြီး အဖေကကြည့်ရှုပေးခဲ့တော့ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေကတောင် ကျွန်တော်တို့ကို အဲဒီတုန်းက သူဌေးတွေလို့ ထင်ခဲ့ကြမှာပါ။ နောက်ကွယ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ အသေအလဲ ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။
ဆိုပါတော့ ဒီလိုနဲ့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကုန်မှာ လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်နဲ့ ကျွန်တော်ဟာ စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ကနေ ကျောင်းပြီးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပြီးချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင်က လယ်ဆယ်ဝန်ကြီးဖြစ်နေချိန်နဲ့ ဝန်ကြီးဌာနမှာ အလုပ်ကို ဖေါဖေါသီသီခေါ်နေချိန်ပေါ့။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကျောင်းပြီးပြီးချင်း ဝန်ကြီး ဌာနရဲ့ အလုပ်ခေါ်တာကို စောင့်မနေနိုင်ပါဘူး။ စာမေးပွဲအောင်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း ချက်ချင်းပဲ အဖေ့မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရဲ့စာရေးပြီးမိတ်ဆက်ပေးလို့ လူသုံးဆေးရောင်းတဲ့ကုမ္ပ္ပဏီမှာ အလုပ်စပြီး ဝင်လုပ်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီအချိန်မှာ လစာ ၃၅ဝဝ ကျပ် စပြီးရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က အစိုးရအလုပ်ဝင်လုပ်ရင် လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးတစ်ယောက် ရမယ့်လစာက ကျပ် ၁၅ဝဝ လောက်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တွေးတယ်။ ဒီလိုတစ်လ ကျပ် ၁၅ဝဝ ဆိုတာ ငါတစ်ယောက်အတွက် နေဖို့မပါ စားလောက်ရုံပဲ။ ဒီပိုက်ဆံနဲ့ ငါဘယ်လိုအိမ်ကို ထောက်ပံ့မလဲ၊ အဖေကလည်းတခြား မဟုတ်တာလုပ်ကာ ရမယ့်ဝင်ငွေကို မကြိုက်ဖူး။ ဒါနဲ့ပဲ အစိုးရဝန်ထမ်းအလုပ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ကျောခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
အဲဒီအချိန်ကထဲက ကုမ္ပ္ပဏီမျိုးစုံမှာ အလုပ်ပေါင်းစုံအောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အမြဲတမ်းလည်း တိုင်းပြည် အတွက် ဝင်ငွေခွန်ကို မှန်မှန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ တရားဝင်နိုင်ငံခြားငွေရတဲ့ ကုမ္ပ္ပဏီတွေမှာလုပ်တော့လည်း သူတို့က မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်ကို လစာလွဲပေးတော့ ရတဲ့လစာရဲ့ (၁ဝ)ရာခိုင်နှုန်းကို မှန်မှန်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော့်ညီငယ်ကလည်း စက်မှုတက္ကသိုလ်ကနေကျောင်းပြီးလို့ ၁၉၉၉ ခုနှစ်လောက်ကစပြီး ရန်ကုန်က မလေးရှားပိုင်ဟော်တယ်ကြီးတစ်ခုမှာ လုပ်တော့ နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ လစာရခဲ့ပြီး အမြဲအခွန်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။
ကျွန်တော်ဖခင်မဆုံးခင်က အမြဲလိုလို သူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ရင် သူပြောတတ်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ ငါ့သားတွေထောက်ပံ့တဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ငါတို့ထမင်းစားရတာ သိပ်သန့်ရှင်းတယ်တဲ့။ တိုင်းပြည်အတွက် အခွန် ဆောင်ပြီးမှ မိဘကိုပေးကမ်းထောက်ပံ့လို့ပါလို့ အမြဲဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက စောစောကပြောသလို မိဘရဲ့ခံယူချက်က သားသမီးတွေကို မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကို ရောက်အောင် တွန်းပို့ပေးတာပါပဲ။
အခွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ ရင်နာစရာပြောစရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ၁၉၉၉ နှစ်ကုန်ကနေ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်၊ မေလအထိ Sumitomo Corp ရဲ့ ရန်ကုန်ရုံးခွဲမှာ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ လစာကို ဂျပန်ကနေလွဲတော့ လစဉ်အခွန်(၁ဝ)ရာခိုင်နှုန်း ဘဏ်ထဲမဝင်ခင်မှာ ဖြတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဏ်စာရင်းမှာ အခွန်ဆောင်ပြီး အရပ်အခေါ် ဒေါ်လာ ၄ဝဝဝ ကျော်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ၂ဝဝ၂ စက်တင်ဘာလလောက်မှာ ကျွန်တော် တရားရုံးက လေလံပစ်တဲ့ တိုက်ခန်းကို ကျပ်ငွေ သိန်း(၃ဝ)ကျော်နဲ့ လေလံဆွဲဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ပေါက်ဈေးက တစ်ဒေါ်လာ ၉ဝဝ လောက်ထင်ပါတယ်။ တရားရုံးကနေဝယ်တော့ အရပ်ပွဲစားနဲ့ ဝယ်သလိုမဟုတ်ပါဘူး။ တန်ဘိုးရဲ့ ၇%ကို အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းစာချုပ်နဲ့ တရားရုံးမှာ စာချုပ် ချုပ်ရပါတယ်။ မှတ်မှတ်ယယ စာချုပ်တန်ဖိုးချည်း နှစ်သိန်းရှစ်သောင်း လောက်ကျပါတယ်။ နောက်တော့ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်လောက်မှာ ထင်တယ်။ ကျွန်တော် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ လိုအပ်ရင် စကာင်္ပူသွားစရာရှိတော့ ပတ်စ်ပို့ လုပ်ရတယ်။ ဒီမှာ ပုံစံ(၁၇)လိုတော့ မြို့နယ်အခွန်ရုံးကိုသွားပါတယ်။ ဒီတော့အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းရဖို့ အိမ်စာချုပ်ပြရပါတယ်။ အိမ်ဝယ်တုံးက MFTB ကနေ ရှိတဲ့ဒေါ်လာတွေ အကုန်ထုတ်ထားတဲ့ ဘဏ်စာရင်း ပြရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်ကိုတာဝန်ကျတဲ့ အခွန်ဝန်ထမ်းက အခွန်မှူးနဲ့တွေ့ခိုင်းပါတယ်။ နေ့လယ်(၁၁)နာရီလောက်မှာ အခွန်ဦးစီးမှူး မရောက်လာသေးလို့ စောင့်နေရပါတယ်။ ခဏနေတော့ ခြေထောက်တစ်ဖက်မရှိတဲ့ အခွန်ဦးစီးမှူးက တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ဖင်ကောက်ဗင်ကားနဲ့ ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်လို နှစ်သိန်းရှစ်သောင်းတန်စာချုပ်နဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ အိမ်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်လိုမျိုး အခွန်ဦးစီးမှူး တစ်ယောက်က မတွေ့ဖူးပါဘူးတဲ့။ အခွန်ရုံးကထုတ်ဝေထားတဲ့ အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းစာချုပ်ကို မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးမှူးတစ်ယောက်က မမြင်ဖူးတာဖြစ်နိုင်စရာလားဗျာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ဝယ်တဲ့အတွက် ဝယ်ခွန်ဆောင်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဝယ်ခွန်ဆောင်ရမှာကို သဘောတူပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အိမ်ဝယ်တာ ဝင်ငွေခွန်(၁ဝ)ရာခိုင်နှုန်း၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်(၇)ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်ပြီးသားနဲ့ ကျွန်တော့်MFTB က FEC ထုတ်ချိန်နဲ့ အိမ်ဝယ်လို့ စာချုပ်ချုပ်တာ တစ်ချိန်ထဲဆိုတာ ပြပါတယ်။ သူကဘာပြောလည်းဆိုတော့ ကျွန်တော့် FEC တွေသွားရောင်းထားတဲ့ တရားဝင်ငွေရောင်းပြေစာ တင်ပြနိုင်သလားတဲ့၊ အဲဒီအချိန်က သိမ်ဖြူငွေလဲကောင်တာလည်း ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ မရှိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်က အပြင်မှာရောင်းတာဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြေစာရှိမှာလဲ။ ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော့်ကို ပုံစံ(၁၇)ထုတ်ပေးဖို့အတွက် ကြိုတင်ခွန်ကျပ်(၃)သိန်း ဆောင်ခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်က (၃)သိန်း ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံခြားလည်းမသွားတော့ဘူး။ ပုံစံ(၁၇)လဲမယူတော့ဘူး ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ (၂)သိန်း ဆောင်ပေးပါလို့ ထပ်ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာလည်း အစည်းအဝေးကို မဖြစ်မနေတက်ရမှာဆိုတော့ နောက်ဆုံး အောက်သက်သက်နဲ့ တာမွေကအစိုးရဘဏ်မှာ ကြိုတင်ငွေဆိုပြီး ကျပ်(၂)သိန်းဆောင်ခဲ့ ရပါတယ်။
ဒါတွေရေးပြနေရတာက ကျွန်တော်တို့မိသားစု နိုင်ငံခြားကို ပြောင်ရွေ့အခြေချဖြစ်ပုံကိုပြောချင်လို့ပါ။
လူငယ်အကြောင်းပြောရင်းကနေ ဘယ်တွေအထိရောက်ကုန်မှန်း မသိတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော့်သားကို သူများတွေ(၃)နှစ်မှာ စပြီးမူကြိုထားကြတာကို ကျွန်တော်တို့လင်မယားက ဆန့်ကျင်ပြီး (၄)နှစ်ပြည့်ပြီးမှ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားလမ်းကSILTA မှာ စပြီး ထားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်သားကို အခြေခံကောင်းချပေးခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းကလေး တစ်ကျောင်းပါပဲ။ ဒါတောင် ကျွန်တော်တို့က (၅)နှစ်မှ စထားချင်တာပါ။ အားလုံးက ဝိုင်းပြီး အကြံပေးကြတယ်။ (၅)နှစ်မှစထားရင် ကျောင်းမှာ ဘယ်ဆရာမမှ သူဝလုံးရေးတာ၊ အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ရေးတာ စောင့်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ မထားချင်ထားချင်နဲ့ ပို့လိုက်ရတာပါ။
ဒီကျောင်းလေးကလည်း ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပါ။ တစ်ချို့တစ်တွေဆို သင်ကြားတာနှေးလို့ဆိုပြီး တစ်ခြား ကျောင်းကို ပြောင်းသွားတာလည်း မနည်းလှပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လင်မယားကတော့ ခေါင်းခပ်မာမာပါပဲ။ သားက စကာင်္ပူမပြောင်းခင်အထိ ဒီကျောင်းလေးမှာပဲ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတက်ခဲ့တာပါ။ နွေကျောင်းပိတ်ရက် တွေကျတော့ တနလာင်္ကနေ သောကြာနေ့အထိတက်ရတာပေါ့။
ဆိုချင်တာက ကျွန်တော်တို့ဟာ ကလေးကိုအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် အလွန်တော်အလွန်တတ် ဖြစ်စေချင်တဲ့ မိဘတွေထဲမှာ မပါပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်မှာ အစိုးရကျောင်းမှာ သူငယ်တန်းစတက်ရပါတယ်။ ဒီမှာမှ ပြသနာစပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့က အတန်းပိုင်ဆရာ(သို့)ဆရာမရဲ့ ကျူရှင်မှာ မထားပါဘူး။ လိုလည်းမလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူငယ်တန်း၊ အဲဒီကနေ (၁)တန်း၊(၂)တန်း၊ စသဖြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျူရှင်ကို လုံးလုံးမပို့ခဲ့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ ကျူရှင်မတက်တဲ့ကျောင်းသားဟာ တက်တဲ့သူနဲ့အခွင့်အရေးမတူပါဘူး။ အမှတ် ကလည်း ဘယ်လိုမှန်မှန်၊ ဘယ်လိုတော်တော် သူတို့လောက် ဘယ်တော့မှမရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကလိုပဲ စာဆိုတာ သင်သမျှအကုန်ဖတ်ပြီး စာမေးပွဲမှာ ရသလောက် ဖြေစေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာမေးပွဲနီးရင် အနီးကပ်ကျူရှင်တွေဆိုပြီး အတန်းပိုင်တွေက မေးခွန်းတွေ ပေးပါတယ်။ မူလတန်းမှာတောင်ပါ။ ကျောင်းမှာ မိဘချင်းခင်လာတော့ ကျူရှင်ထားတဲ့ တစ်ချို့မိဘတွေက မေးခွန်းတွေ ပေးတတ်ပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော့်ဇနီးကယူလာပြီး စာမေးပွဲမတိုင်မီ အကုန်ကျက်မှတ်စေပြီး စာမေးပွဲဖြေမယ့်မနက်မှာ သူတို့ပေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ် ဖြေခိုင်း တတ်ပါတယ်။
နောက်တော့ ကျွန်တော့်သားက နည်းနည်းရိပ်မိလာပါတယ်။ ဖြေခါနီးဆို လေ့ကျင့်ခိုင်းတဲ့ဟာတွေက အမြဲလိုလို အကုန်ပါနေတာကိုပါ။ ကျွန်တော့်သားက မေးပါတယ်။ မေမေကသိရင်လည်း စောစောကထဲက ဒီမေးခွန်းတွေကိုပဲ ကျက်ခိုင်းပါလားတဲ့။ ကျွန်တော်တို့ ရှော့(ခ်)ရလာပါတယ်။
ဒီကြားထဲမှာ ကျွန်တော်က ၂ဝဝ၅ လောက်ကစပြီး နှစ်စဉ်လိုလို စကာင်္ပူကို အစည်းအဝေးလာ တက်ရပါတယ်။ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ ထွက်စရာရှိတော့ ဗဟုသုတရအောင်ဆိုပြီး သူတို့သား အမိကိုပါ လေယာဉ်လက်မှတ်ဖိုး အကုန်ခံပြီး ခေါ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကုမ္ပ္ပဏီကို သူတို့ကိုပါ အလည် ခေါ်ချင်တယ်လို့ပြောပြတော့ ကျွန်တော့်ဘော့(စ်)က သဘောကောင်းသူဆိုတော့ ဟိုတယ်ကို မိသားစု နေလို့ရအောင် သူစီစဉ်ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အစည်းအဝေး(၃)ရက်အပြင် နောက်ထပ်ခွင့်(၅)ရက်လောက် ထပ်ယူပြီး ခွင့်ယူတဲ့ ရက်တွေမှာ ကျွန်တော့်အမေဖက်က အမျိုးတွေအိမ်မှာ တည်းခိုဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစု စကာင်္ပူကိုအလည်လာကြတယ် ဆိုပါတော့။ အဲဒီအချိန်အထိ နိုင်ငံခြားမှာ ထွက်နေမယ်လို့ စိတ်ကူးမရှိသေးပါဘူး။
အဲဒီမှာ ကျွန်တော့်အလုပ်တွေပြီးလို့ ဟော်တယ်ကနေ အမျိုးအိမ်ကိုပြောင်းပြီးနေဖြစ်တဲ့အချိန်၊ သူ့အစ်ကို၊ အစ်မတွေနဲ့ အတူတူဆော့ကစားကြသလို၊ သူနဲ့ SILTA မှာ ကျောင်းနေဖက်လည်းဖြစ် စကာင်္ပူကို အရင် ရောက်နှင့်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ သူတို့တစ်တွေ ဆုံကြ၊ အတူတူဆော့ကစားကြတော့မှ ကိုဇဂနာ ကြုံတွေ့ရသလို ကျွန်တော်တို့လည်း ခံစားလိုက်ရတာပါပဲ။
စကာင်္ပူမှာနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့မျက်နှာနဲ့ မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ သာမန်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာမှာ ယုံကြည်ချက်၊ လူရာဝင်မှု၊ ရဲရင့်မှုတွေ၊ စသဖြင့် ကွာခြားတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော်ရော၊ ကျွန်တော့်ဇနီးပါ နိုင်ငံခြားနဲ့ နိုင်ငံခြားကလူတွေကို အခုအချိန်အထိ အထင်ကြီးတဲ့စိတ် မရှိကြသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လွတ်လပ်မှုနဲ့ လူရာဝင်မှုကိုတော့ အလေးထားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း စောစောကလို အပြည့်အဝ ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ထားတာတွေကို လူရာမသွင်းမှုတွေ၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် လူတိုင်း လူတိုင်း တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်တစ်ခုထဲနဲ့ ကျရာနေရာက ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကို၊ သူတို့တစ်တွေသာ တိုင်းပြည်ကိုချစ်သူတွေဆိုပြီးကျွေးကျော်ကာ ဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုတွေအတွက် ဝမ်းနည်းခဲ့ရဘူးပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမှာအပြင် မျိုးဆက်သစ်တွေကို ငွေသာလျှင် အရာရာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုးထဲမှာ ငွေနောက်လိုက်ပျက်စီးစေမယ့် အပေါစားစိတ်ဓါတ်တွေကို မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်ကို လောင်းရိပ်အဖြစ်မခံသင့်တော့ဘူးလို့ တွေးမိလာပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းစ(၁)ရက်နေ့မှာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့ရ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တော့ ဘယ်လိုပင်မျိုးရိုးဗီဇကကောင်းပါစေ၊ မြေဆီမြေနှစ်မရှိ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဖျက်ပိုးမွှား ရောဂါတွေနဲ့ဆိုရင် အရည်အသွေးကောင်း၊ အထွက်နှုန်းမြင့်တဲ့ သီးနှံဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာ သိနေလေတော့ ရောက်ရောက်ချင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်အတွက် ရေခံမြေခံကောင်းရာပြောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့လိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်၊ ကျွန်တော့်ကုမ္ပ္ပဏီကို စကာင်္ပူကိုထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ချင်ကြောင်းအသိပေး၊ သူတိှု့ဆီမှာ ပေးစရာအလုပ်မရှိဘူးဆိုရင် အလုပ်ထွက်ပြီး တစ်ခြားမှာ ရှာမယ်ဆိုတော့ သူတို့ကလည်း အလုပ်ကမထွက်သေးပဲ ခွင့်ယူပြီး အလုပ်ရှာဖို့ သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော့်ရိုးသားမှုကို ယုံကြည်ကြသူတွေပါ။ ဒီလိုနဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မြန်မာနှစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ နိုင်ငံခြားကို ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ရောက်ပြီး (၂)ပတ်အတွင်းLandscaping Company တစ်ခုမှာ အလုပ်ရပြီး S Pass ကျကာ မေလ(၂)ရက်နေ့မှာ အလုပ်တန်းဝင်ရပါတယ်။
တိုတိုပြောရရင် ဒီလိုနဲ့ (၂)လလောက်အကြာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဇွန်လကုန်လောက်မှာ ကျွန်တော့်မိသားစုကို စကာင်္ပူရောက်အောင် ခေါ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။(၆)လအတွင်း အမြဲတမ်းနေထိုင်သူအဆင့်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားလိုက်တာ ၂ဝဝ၉ နှစ်ဆန်းမှာ စကာင်္ပူတွင် အမြဲနေထိုင်သူအဆင့်ကို ရရှိလိုက်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ကျွန်တော့်ညီငယ်လည်း ကျွန်တော်နဲ့ခံစားချက်ခြင်းတူညီလေတော့ တစ်လဒေါ်လာ ၈ဝဝ လောက်ရတဲ့ မြန်မာပြည်က အလုပ်ကိုထွက်ပြီး ကျွန်တော်တို့မိသားစုနောက်ကို လိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော်လည်း မူရင်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်မှာကထဲက လုပ်ခဲ့တာ့ ကုမ္ပ္ပဏီမှာ ပြန်လည်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားနဲ့ ကျွန်တော့်သား၊
အခုအချိန်အထိတော့ ကျွန်တော်တို့ စိုက်ပျိုးရေးစကားနဲ့ပြောရရင် ကျွန်တော့်မျိုးဆက်ကို ဗီဇကောင်း တွေချပေး၊ မြေဆီမြေသြဇာကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှာ ရှင်သန်စေပြီးပေမယ့် အထွက်ကောင်း၊ အရည်အသွေးကောင်းမယ်လို့ အတတ်မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ လိုအပ်တာတွေကို ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ သဘောပဲရှိသေးတာပါ။ ထူးခြားတာက သူကစာဖတ်ဝါသနာပါသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတယ်။ သူဖတ်ချင် တာတွေကို စာကြည့်တိုက်မှာ အချိန်မရွေးရှာလို့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတုံးကလို လူတောသူတော မတိုးရဲသလို စိတ်ဓါတ်မရှိတော့ပါဘူး၊ အရင်တုံးက စကားနည်းတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ သူအဖွားတောင် နားညီးအောင် သူပြောနေတတ်ပြီ၊ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့စာမှာ ကျွန်တော်တို့ထက် သူသာနေပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေမှာ တစ်လွဲဆံပင်ကောင်း စိတ်ဓါတ်တွေရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ကလေးကို အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေမှ လူရာဝင်တယ် ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ရောက်လာကထဲက အခုအချိန်အထိ အိမ်မှာ မြန်မာစကားကိုပဲ စွဲမြဲစွာပြောစေပါတယ်။ သားက အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တောင် မြန်မာလိုပဲပြန်ဖြေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမြင်ကတော့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီဘာသာစကားကို မတတ်ပဲနေမှာ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ မြန်မာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာလိုမရေးတတ်၊ မပြောတတ်ဖြစ်နေမှာကိုသာ စိတ်ပူနေဆဲပါ။ ကံကောင်းချင်တော့ သားက ဟာသကြိုက်ပါတယ်။ သူကြိုက်တဲ့ အကြည်တော်၊ မင်းလူ၊ စတဲ့ ဟာသစာရေးဆရာတွေရဲ့ စာအုပ်တွေဆိုရင် သည်းကြီးမဲကြီး ဖတ်တတ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်တွေကို ရှာဖွေပေးထားရပါတယ်။ မြန်မာစကား အပြောနဲ့အဖတ် အတွက်ကတော့ သိပ်ပြီးမပူရတော့ပါဘူး။ သူထွက်လာတော့ (၂)တန်းအောင်(၃)တန်းတက်ကာစမှာပါ။ အခုတော့ (၁၁)နှစ်ကျော်လို့(၁၂)ထဲရောက်ပြီး စကာင်္ပူကိုရောက်တာလည်း(၄)နှစ်ထဲမှာ ရောက်နေပါပြီ။ မြန်မာစာအရေးအတွက် သူ့ကို ကျောင်းအားရက်တွေမှာ မြန်မာလို ဒိုင်ယာရီရေးဖြစ်အောင် ကျွန်တော့် ဇနီးက ကြပ်မတ်ပေးပါတယ်။ သူက အကြမ်းအရင်ရေးပြီး သူ့အမေက သတ်ပုံပြင်ပေးပါတယ်။ ပြီးရင်စာအုပ်ထဲမှာ အချောပြန်ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်သားရဲ့ ဒိုင်ယာယီထဲက စာမျက်နှာတစ်ခုကို ဖတ်ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းရင်း ဒီစာစုကိုအဆုံးသတ်ပါရစေ။
ကိုကိုမောင် (၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၇) ရက်)
Aung Wunna said...
Very good.Thanks alot for your post.
Your son diary is so lovely. What an intelligent kid. Always appreciate for useful and informative each single post.
စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဖတ်မိတယ်။ ဆရာက အရေးအသား အတော်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဗျာ။ ကျန်းမာပါစေ။
I agree with KO KO MAUNG. The story is Absolutely Right. All the words mentioned in his article are correct and no artificial. (I mean he wrote true story)As I am class mate of KO KO MYAT (Ko Ko Maung's Brother), So I knew the part of his story. I wish Ko Ko Maung to continue in writing more and more good article in future. Cheers , MMKT